EZAKAMUVA: UZuma usethumele ithimba eZimbabwe, ‘usekhulumile noMugabe’ – LIVE Express
UMengameli Jacob Zuma, ngokwesikhundla sakhe njengoSihlalo we-SADC, usethumele ithimba elikhethekile eZimbabwe kanye nase-Angola mayelana nesimo sezepolitiki esiqhubekayo kuleliya lizwe.
IHhovisi likaMengameli lithi uzothumela uNgqongqoshe we-Defence and Military Veterans uNosiviwe Mapisa-Nqakula kanye noNgqognqoshe we-State Security u-Adv Bongani Bongo ukuba baye eZimbabwe ukuyohlangana noRobert Mugabe kanye neZimbabwean Defence Force.
“UMengameli Zuma ukhulumile noMengameli Robert Mugabe ngaphambilini namhlanje noveze ukuthi uvalelwe ekhaya lakhe kodwa ukahle,” kusho iHhovisi likaMengamli, lengeza ngokuthi iNingizimu Afrika iyaxhumana futhi ne-Zimbabwean Defence Force (ZDF).
Leli hhovisi lithi elinye ithimba lizothunyelwa e-Angola ukuze liyobonana noMengameli Joao Lourenco, nongiSihlalo we-SADC Organ on Politics, Defence and Security ukuze bamubikele ngalesi simo.
Imibiko yabezindaba ithi umbutho wezempi eZimbabwe usuhlwithe amandla kuMengameli Robert Mugabe waphinde wathatha nezintambo zokulawula isiteshi sikamabonakude sikahulumeni, iZBC
Isinyathelo sombutho wezempi eZimbabwe kukholakala ukuthi sidalwe isinqumo sikaMugabe zokuxosha esikhundleni obesiysekela lakhe, u-Emmerson Mnangagwa
Imibiko yakamuva ngokweTwitter ithi uMnangagwa usenziwe umengameli wesikhashana. Kukholakala ukuthi uMugabe wamxosha ngoba efuna kungene unkosikazi wakhe uGrace Mugabe esikhundleni sokuba ngumengameli olandelayo eZimbambwe.